मुटुका लागि मदिरा राम्रो कि नराम्रो ? – Sadarline
बाँकेका युवाका लागि तीनदिने मानव बेचबिखनबिरुद्ध तालिम
२२ आश्विन २०७३, शनिबार ०३:५८
डा. मिलन प्रकाश श्रेष्ठ,
मुटुरोग विशेषज्ञ, ग्राण्डी अस्पताल
डाक्टरसाब, म त रक्सी खान्न, कहिलेकांही वियर मात्रै हो ।
डाक्टरसाब, दिनहुं अलिअलि रक्सी त मुटुलाई राम्रो भन्छन् नि होइन ?
डाक्टरसाब, म त पिउने भनेको विदेशी मात्रै हो, नेपाली, लोकल भनेको त छुदा पनि छुन्न ।
तर पनि मानिसको स्वभाव, हानि नै गर्छ भन्ने थाहा पाएर पनि सेवन गर्नैपर्छ ।
कोही नियमित निर्धा्रित परिमाण पिउने स्वभावका हुन्छन् भने कोही पिएपछि मात्तिनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
व्हिस्कि खानुस, वाइन खानुस, वियर खानुुुस, भोड्का, लोकल, रम, जीन जे पिए पनि सबैमा अल्कोहोलको मात्रा भइहाल्छ । कुरा प्रतिशतको मात्रै हो र प्रतिशत बोतलमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
हरेक कुराको केही न केही राम्रा–नराम्रा पक्ष भएझैं यस्ता अल्कोहोलयुक्त पेय (हार्ड ड्रिङस) का पनि केही राम्रा नराम्रा पक्ष छन् ।
स्वस्थ मानिसले मदिरा सेवन गर्ने नै हो भने पनि माथि उल्लेखित मात्राको बिचार गर्नु जरुरी हुन्छ । मुख्य कुरा आफूमाथि नियन्त्रण हुनु जरुरी हुन्छ । विहानैदेखि रातिसम्म मदिरामै मस्त हुने बानीले आफैलाई भित्रभित्रै खराब गरिरहेको हुन्छ भन्ने विर्सनुहुंदैन । स्वास्थ्यखबरबाट साभार
सदरलाइनडटकम, २२ असोज, नेपालगन्ज : सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशिल मानिने बाँके जिल्लामा चाडपर्व नजिकिंदै जाँदा २ जनाको हत्या भएको छ । बाँकेको नौवस्ता–७ सुतैंयामा एक युवकको हत्या गरी माटोमा गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ भने कम्दीमा एक महिलाको हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा छ । माथिका दुई घटनाका विषयमा नेपाल […]